Metal akụkụ - Mestech Industrial Limited
Akụkụ ígwè bụ blọk ọla, ogwe osisi, akwa efere, shei, wdg. nke ejiri ihe igwe mee.
Ngwongwo nke metal: ígwè na nonferrous ọla (ma ọ bụ ndị na-abụghị ferrous ọla). Metal nwere ezigbo ihe onwunwe nke ihe ndị na-abụghị nke dị ka plastik, osisi, eriri na ihe ndị ọzọ, bụ ndị a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na ngwaahịa mmepụta ihe.
1. Ezigbo mmekọrịta, ejiri mee akụkụ ntụzi, dị ka rotor moto, ọkụ eletriki, soket.
2. A na-eji arụ ọrụ ọkụ dị mma, nwere ike iji mee ka akụkụ ikpo ọkụ na akụrụngwa igwe, dị ka igwe ọkụ, mma engine, wdg.
3. Ọkpụkpụ dị mma, nwere ike ịbụ nrụrụ plastik nke ihe igwe, nhazi igwe akụkụ dị iche iche.
4. Ezi ịgbado ọkụ.
5. Ngwongwo nke metal nwere nnukwu ihe omuma, ike di ike na ike.
6. The metal nwere elu agbaze mgbe na pụrụ ịbụ eru maka elu okpomọkụ na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi.
7. Metal akụkụ nwere ike inweta ezi akụkụ ziri ezi na elu àgwà, nke na-eji mee ka nkenke igwe akụkụ.
Metal akụkụ na-ọtụtụ-eji n'ibu akụrụngwa, electronic ngwa, shipbuilding, ụgbọelu na ụlọ abụ. Akụkụ ígwè anyị na-eme maka ndị ahịa anyị bụ ndị a: Shaft, gear, die casting, sintering, sheet metal
Die nkedo akụkụ
Nkenke metal akụkụ
Aluminom anwụ akụkụ nkedo
Zinc alloy anwụ nkedo akụkụ
Nhazi technology nke metal akụkụ machining, zọ, nkenke mgbatị, ntụ metallurgy, metal injection ịkpụzi, laser machining, EDM, ultrasonic machining, electrochemical machining, urughuru doo machining na àjà ihe ọ ultraụ -ụ-elu na-agba machining. Yiri ntughari, egwe ọka, ibe ya, ihe nkedo, egweri, igwe CNC, CNC CNC CNC etiti bụ ịhazi nhazi.
Usoro ọgwụgwọ ihu
1. Anti corrosion na mgbochi ajari ọgwụgwọ: esi nwa na esi-acha anụnụ anụnụ na-akpọ phosphating ọgwụgwọ, nke mere na metal akụkụ nwere corrosion eguzogide na nchara na-eguzogide.
2. Usoro ọgwụgwọ siri ike: usoro ọgwụgwọ iji mee ka ike nke akụkụ ígwè dịkwuo elu: a na-anakwere carburization elu iji mee ka akụkụ nke akụkụ ahụ dịkwuo elu, na agba elu ga-acha oji mgbe carburizing; imenyụ ọgwụgwọ nwere ike ime ka ike ghara ịgwụ;
3. agụụ okpomọkụ ọgwụgwọ nwere ike melite mkpokọta ekweghị ekwe.
Mestech na-enye ndị ahịa atụmatụ na nhazi nke akụkụ nchara, alloy alloy, alloy alloy, zinc alloy na metal metal ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa ngwaahịa na akụkụ ịzụta, biko kpọtụrụ anyị.